Nipoaka ny baomba teny amoron-dranomasina malaza mpizahatany any Thailand: tsy nisy ny maty
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nipoaka ny baomba teny amoron-dranomasina malaza mpizahatany any Thailand: tsy nisy ny maty
Desambra 27, 2018
Ny morontsiraka Samila any Thailand dia morontsiraka mpizahatany malaza. Omaly alina dia baomba roa no nanetsiketsika ny morontsirak'i Samila malaza, ka niteraka fahasimbana tamin'ny sarivongana Mermaid Golden malaza sy ny sary sokitra saka sy totozy. Ireo mpizahatany avy any Indonezia, Malezia ary Singapour dia mitsidika ny Samila Beach.
Eo anilan'ireo sarivongana ireo dia misy sarivongana iray hajaina indrindra mampiseho an'i Mae Thorani ho toy ny zazavavindrano, ny sary vongana dia tandindon'ny Songkhla ary lasa toerana masina ho an'ny mponina izay mino fa manana fahaizana hitondra harena tsara ho azy ireo izany. Mora azo amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka any Hat Yai-Songkhla
Nikatona ho an'ny besinimaro ny torapasika Samila sy ny lalana eny amin'ny distrikan'i Muang Songkhla. Ny alakamisy taorian'ny baomba roa nipoaka tampoka dia baomba telo indray no hita teny amoron-dranomasina. Tsy nisy kosa ny aina nafoy.
Tamin'ny Alarobia teo tokony ho tamin'ny 10.30 ora alina no voalaza fa nipoaka ireo fipoahana ireo saingy tsy nanao izany ny mpitandro ny filaminana -maso ny morontsiraka hatramin'ny alakamisy maraina, noho ny tahotra ny hanafika.
Nino ny tompon'andraikitra fa napetraka teny amoron-dranomasina ny baomba ny alarobia alina taorian'ny nialan'ny mpizahatany rehetra.
Ny governoran'i Songkhla Weeranant Pengjan dia nahita ny baomba ho toy ny tandindona ary mikendry ny hampihorohoro ny fitokisan'ny vahoaka. Nanafatra filaminana farany izy fepetra manerana ny faritany, indrindra any amin'ny distrikan'i Hat Yai, izay kasaina hisian'ny fanisana sy fankalazana ny Taom-baovao.
Ireo loharanom-piarovana no nanome tsiny ny daroka baomba nataon'ny vondrona mpikomy Barisan Revolusi Nasional. Nilaza izy ireo fa nihaona tamin'ny sekoly tao amin'ny distrikan'i Chana ireo mpitarika azy ary efa nisy ny tompon'andraikitra teo an-toerana nanaitra amin'ny fanafihana mety hitranga any amin'ny faritra.
Ny baomba namboarina tamin'ireo sarivongana roa dia natao ho an'ny sehatry ny fizahantany.
Tsy mbola naneho hevitra ny Fahefan'ny fizahantany any Thailand.